Welcome to Himawari Col,.td. | Himawari Col,.td.
Asia Shop in Japan
Online Shop in Myanmar
Himawari Myanmar မှ ကြိုဆိုပါ၏
ဂျပန်နိုင်ငံ အိုဆာကာမြို့ရှိ Himawari Myanmar ရုံးချုပ်သည် ပညာရေးနှင့် ဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုစနစ်ဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်လိုအပ်နေခြင်း နှင့်ဗီဇာ အခက်အခဲများကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။
HIMAWARI TRAVELS & TOURS
လုပ်ငန်းအပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဆင့် (BUSINESS FLOW)
လျှောက်ထားခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကျောင်းများသို့ ပညာတော်သင်ခြင်း
ကာလတိုဗီဇာ ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခြင်း
ဗီဇာနှင့်ပါက်သက်ပြီး အခက်ခဲများရှိပါက Himawari Myanmar သို့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
သင်သည် ဂျပန်ဗီဇာ Refusal ငြင်းပါယ်ခံ ရဖူးပါလား ?
သင့်အကြောင်းကို အပြည့်အဝ နားလည်အောင် တင်ပြပေးမည့် Himawari Myanmar ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Himawari Myanmar (Japan Office)
〒570-0011大阪府守口市金田町1−13−11Postal Code 570-0011,
Office Ph : 06-6902-4543
Office HP : 090-8525-4283
Shwe Nay Kyar (Asia Shop)
Himawari Group(Myanmar Office)
အမှတ် (၈၄၁)၊ သမာဓိလမ်း၊ မေတ္တာညွှန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေ၊ ရန်ကုန်မြို့
ဖုန်း - ၀၉ ၂၅၆၇ ၀၉၈၇၊ ၀၉ ၂၇၃၄ ၅၆၄၁
Online ဖြင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု စတင်ခြင်း အကြောင်း
“မင်္ဂလာပါရှင်” Himawari Myanmar ၏ ဂျပန်နိုင်ငံနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေး အကြံပေးဝန်ဆောင်မှု
ကပ်ရောဂါအန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရန် သြဂုတ်လ ( ၁ ) ရက်နေ့ မှ စတင်ပြီး၊ ၁၀၀% အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု အဖြစ်ပြောင်းလဲမည် ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးခြင်း။
COVID-19 ကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါအဖြစ် ကြေငြာခဲ့ပါသည်။ ကပ်ရောဂါကင်းဝေးစေရေးအတွက် ပြည်သူများ ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပေးကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းထားပါသည်။
ထို့ကြောင့် Himawari Myanmar မှ ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ဂျပန်ပညာရေး နှင့် ဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ( ၁ ) ရက်နေ့ မှစပြီး၊ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကို လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအပ်ပါသည်။
Himawari Myanmar ၏ Consultant နှင့် ဂျပန်ရှေ့နေတို့မှ ဂျပန်ပညာရေးနှင့် ဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများကို Work from Home ဖြင့် ရာနှုန်းပြည့် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Customer များအနေနှင့် ရုံးသို့လာရောက်ရန်မလိုဘဲ ၊ ပညာရေး နှင့် ဗီဇာအခက်အခဲများကို အိမ်မှာနေရင်း အဆင်ပြေစေပါမည်။
အကယ်၍ တိကျသော ပညာရေးအကြံဉာဏ်များ၊ ဗီဇာဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများကို လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးလိုပါကလည်း Himawari Myanmar သို့ ဆက်သွယ်ပြီး Appointment ယူနိုင်ပါသည်။
Copyright © Himawari Myanmar. All Rights Reserved.